Grand Royal Group International (GRGI) - April, 2020 - Grand Royal Group International (GRGI) April, 2020 - Grand Royal Group International (GRGI)
Grand Royal Group International Co.,Ltd တွဲဖက်ဥက္ကဌ ၏ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်
ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော ဖောက်သည်များ၊ ဝန်ထမ်းများနဲ့ မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျာ။
COVID-19 ရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ ကော်ရိုနာရောဂါပိုးဟာ ကျွန်တော်တို့ လူမှု၀န်းကျင်တွေ အတွင်းမှာ အလျင်အမြန် ကူးစက်ပျံ့ပွားနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးဖြစ်သော်လည်း၊ ‌ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိပဲ ခေါင်းအေးအေး ထားပြီး၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနက အကြံပြုထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက် တွေကို သေချာလိုက်နာကြမယ်ဆိုရင် ဒီရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင် ပါတယ်။
ဒီရောဂါပိုးကြောင့် အခုလို ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲမျိုးရှိလာနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဖောက်သည်တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး လုံခြုံစိတ်ချရစေဖို့ စီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မျှဝေရန် အရေးကြီးတယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါဟာ ခုထိပျံ့ပွားလျက်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ မသေချာမရေရာတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ နေ့စဉ် နေထိုင်နေကြရပါတယ်။ သို့ပါသော်လည်း အခြေအနေတစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားတာနဲ့ တပြိုင်နက် ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လျင်မြန်စွာချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး တင်ပြအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျန်းမာ‌ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက် များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနဲ့ အကြံပြုချက်များကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် လိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်း၊ ဝန်ထမ်းတွေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လက်တွဲဖော်တွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူမှုဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး အတိုင်းအတာအတွက် အသက်အန္တရာယ် အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး စနစ်တကျ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အချင်းချင်း မေတ္တာတရားရှေ့ထားပြီး ရင်ဆိုင်ကျော်ြဖတ် ကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း အောက်ပါအကြောင်းအရာများကို တင်ပြအပ်ပါတယ်။
၁။ ကျွန်တော်တို့ ဌာနချုပ်ရုံးနဲ့ စက်ရုံတွေမှာ လိုက်နာဖို့ တင်းကြပ်တဲ့ လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ချမှတ် ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းသူ တွေကို ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေ မရောင်းခင် သေချာစွာ စိစစ်စစ်ဆေးရေးများကို ဆောင်ရွက်နေပြီး၊ အလုပ်ခွင်မှာ လိုက်နာဖို့ တင်းကြပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
၃။ ပိုးမွှားကင်းစင်ပြီး၊ သန့်ရှင်းဖို့အတွက် ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ ဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
၄။ ၀န်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလည်း နေကောင်းမကောင်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စစ်ဆေးစောင့်ရှောက်နေပြီး၊ လိုအပ်ပါက အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုလည်း စီမံထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ ဒီရောဂါပိုးကြောင့် တစုံတရာထိခိုက်မှုမရှိအောင် သေချာ ကျနစွာ စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ကိုင်တွယ်၊ သောက်သုံးဖို့လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်အ၀ရှိနိုင်ပါတယ်။
၆။ အားလုံးအတွက် (၂၄) နာရီ ၊ (၇) ရက်ပတ်လုံး အချိန်ပြည့်နိုးကြား တာ၀န်ယူလျက်ရှိပါတယ်။
မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘ၀တွေ ဆက်လက်တိုးတက်ကြီးပွားစေဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းရင်း ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ နေထိုင်လျက် ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ယုံကြည်ချက် ပြည့်ပြည့်၀၀နဲ့ နှစ်သက်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုအပ် ပါတယ်။ မိဘပြည်သူတွေ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး၊ ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာ ရှေ့တန်းက မားမား မတ်မတ် ဦးဆောင်နေတဲ့ အဓိကအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေအတွက် မေတ္တာဖြင့် အခမဲ့လက်သန့်ဆေးရည် ဗူးပေါင်း (၂၀၀,၀၀၀) ခန့် ကိုထုတ်လုပ် လှူဒါန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Grand Royal Group International Co.,Ltd နဲ့ အစုရှယ်ယာဝင်တွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို တိတိကျကျ လိုက်နာပြီး၊ မိဘပြည်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ လူစုလူ‌‌‌‌‌ဝေး မှန်သမျှရှောင်၍ သီးသန့်နေခြင်းပဲဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးတည်းသီးသန့်နေထိုင်ခြင်းပဲဖြစ်စေ၊ တာ၀န်ယူမှု၊ တာ၀န်ခံမှု အပြည့်အ၀ယူ ထားသူပဲဖြစ်စေ၊ အကောင်းဆုံးကျင့်ကြံ နေထိုင်ကြပြီး၊ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေကြပါ၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ နေထိုင်ကြပါရန်နဲ့ တစ်‌ဦးနဲ့တစ်ဦး ဖေးဖေးမမ ကူညီရိုင်းပင်းကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းနိုးဆော် လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအပြည့်အဝ ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
Grand Royal Group International ၏ တွဲဖက်ဥက္ကဌ
The Message from Co-Chairman of Grand Royal Group International Co.,Ltd
Dear Customers, staff of GRGI (Grand Royal Group International Co., Ltd) and the people of Myanmar
The Coronavirus (the virus that causes Covid-19 disease) isafast spreading virus that has the ability to expand rapidly within communities. If we follow the directives and announcements of our leaders and Ministry of Health and Sports calmly without any nervousness, we could prevent the spread of this virus.
We think it is important that we share with you some of the steps we have taken to ensure that our customers and employees stay safe while preparing ourselves to serve our customers to the maximum extent possible during the disruptions that this virus may bring about.
The Covid-19 situation is still evolving and we are living in uncertain times. However, be rest assured that we at GRG will make decisions and act quickly as we gain new facts about the situation. We are following the Ministry of Health guidelines, directives and advice. Most importantly we are also protecting the safety of our team, staff, delivery partners, suppliers and our community at large.
We will meet these challenges by uniting the strength of our people with the strength of the nation, we would like to reassure you ofafew things:
1) We have enacted tough and firm safety protocols throughout our workspace and factories.
2) All our staff, supplies and suppliers are checked before coming to our production lines and we have implemented strict protocols to protect the workspace.
3) Levels of hygiene are at its highest and we will not rest till everything is cleaned.
4) All our staff are checked every day for any signs of illness and precautions are put in place should anyone contract the virus.
5) We make sure that our products are not affected by the virus and are safe to handle and consume.
6) We will keep on our fullest alert 24/7 just for you.
We want to inspire you to move on with life and to make sure that you do everything to keep safe and to enjoy our products with confidence. To encourage members of the general public to remain safe, we have initiated programs to distribute free of cost hand sanitisers to key public bodies which are in the front line of this battle against the virus. We are gearing up to distribute nearly 200,000 bottles of sanitisers to protect the people of Myanmar.
We, Grand Royal Group International Co., Ltd and the shareholders, will continue to keep doing our best for you, the people of Myanmar by following the directives and announcements of our leaders and the Ministry of Health and Sports. Whether you are social distancing, in self-isolation or just trying to act responsibly, please remember to continue being your best self, stay connected, stay safe and act with kindness all the time.
Thank you in believing in us.
ယခုကဲ့သို့သော အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် အချိန်အခါတွင်၊ Grand Royal Group International ကုမ္ပဏီ နှင့် ၎င်း၏ အစုရှယ်ယာဝင်များသည်၊ တွဲဖက်ဥက္ကဌ ဦးအောင်မိုးကျော်၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်၊ မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း ငါးထောင် (၅၀၀၀) တန်ဖိုးရှိ လက်သန့်ဆေးရည်များ ကို ရောဂါပိုး ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိသော၊ တိုင်းပြည်တွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များသို့ လှူဒါန်းလျက်ရှိပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့အားလုံး မြန်မာပြည်နဲ့ တကမ္ဘာလုံးကို အတိဒုက္ခ‌ ရောက်စေတဲ့ ကူးစက်ရောဂါပိုး အန္တ ရာယ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အနေနဲ့ ကြံကြံခံတိုက်ဖျက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနေနဲ့ ရှေ့အနာဂတ်ခရီးကို မားမားမတ်မတ်ချီတက်နိုင်ဖို့၊ COVID-19 ရောဂါကို ယုံ ကြည်ချက်အပြည့်နဲ တိုက်ဖျက်နိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာကို ပြသဖို့လည်းလိုပါတယ်။ တိုင်းပြည်တွင်းက မိဘပြည်သူများကို ဖေးမကူညီတဲ့အနေနဲ့၊ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ နဲ့ အသင်းအဖွဲ့များသို့ လက်သန့်ဆေးရည် ပုလင်းပေါင်း နှစ်သိန်း (၂၀၀၀၀၀) ကိုလှူဒါန်းလျက်ရှိပါတယ်။”ဟု၊ GRGI ၏ တွဲဖက်ဥက္ကဌ ဦးအောင်မိုးကျော်က ပြောကြားသည်။
“ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအခြေအနေပေါ်ပေါက်လာြပီး မကြာမီ ရက်သတ္တပါတ်များအတွင်းတွင်၊ လက်သန့် ဆေးရည်များကို ကျွန်တော်တို့မှာရှိသမျှ လူစွမ်းအားအရင်း အမြစ်တွေ အားလုံးနဲ့ စက်ရုံမှာရှိတဲ့ အ ရင်းအမြစ်တွေအကုန်လုံးကို အင်တိုက်အားတိုက်သုံးပြီး၊ လက်သန့်ဆေးရည်ဗူးပေါင်း နှစ်သိန်း (၂၀၀၀၀၀) ကို ၊ လိုအပ်နေတဲ့ အသင်းအဖွဲ့အမျိုးမျိုးဆီကို အမြန်ဆုံးဖြန့်ချိ လှူဒါန်းနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖြန့်ချိရေးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဌာနခွဲတွေ ကလည်းလိုအပ်နေတဲ့သူ တွေဆီကို အသင်းအဖွဲ့တွေကနေတဆင့်ရောက်ရှိဖို့ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နေကြ ပါတယ်။” ဟု GRGI ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Sanjay Gupta က ဆိုသည်။
ဆက်လက်ပြီး Sanjay Gupta က၊ “ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဌာနက ကျွန်တော်တို့လက်သန့်ဆေးရည် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိလှူဒါန်းတာ ကို ခွင့်ပြုမိန့်ပေးထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုမိန့်ကျတာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာ၊ ၂-၃ ပါတ် အတွင်း၊ အင်တိုက်အားတိုက် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ GRGI အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ မိဘပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တူလက်တွဲလျက်ရှိ‌ကြောင်း ပြသလိုပါတယ်။”ဟုဆိုသည်။
GRGI ၏ လက်သန့်ဆေးရည်ပုလင်းများ အလှူဒါနကို လက်ခံရရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အသင်း အဖွဲ့များစာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်းဖေါပြထားသည်။ လက်သန့်ဆေးရည်တစ်ဗူးတွင်၊ ဆေးရည်ပမာ ဏ (၅၀၀) မီလီလီတာ ပါဝင်ပြီး၊ ချပ်စက္ကူတစ်ဗူးတွင်၊ လက်သန့်ဆေးရည် (၁၉) ဗူးပါဝင်သည်။ လက်သန့်ဆေးရည်၏အမှတ်တံဆိပ်မှာ၊ “နိုင်ငံ့သားကောင်း” ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းစုရဲ့ ခံယူချက်ဖြစ်တဲ့၊ Good Corporate Citizen (ခေါ်) နိုင်ငံ့သားကောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ၊ တတ်နိုင်သ၍ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။” ဟုတွဲဖက်ဥက္ကဌ၊ ဦးအောင်မိုးကျော်က‌‌ပြောသည်။